‘लकडाउन’ मा नायिका वर्षा शिवाकोटीले पशुपंक्षीलाई यसरी बाँड्दैछिन् खाना – Halkhabar kura
२० चैत्र २०७६, बिहीबार १२:११
‘लकडाउन’ मा नायिका वर्षा शिवाकोटीले पशुपंक्षीलाई यसरी बाँड्दैछिन् खाना
काठमाडौं । यतिबेला देश पुरै लकडाउन छ । हुनेखानेहरु घरमै परिवारसँग बसेर दिनैपिच्छे मिठा–मिठा परिकारहरु खाँदै दिन कटाउँदै छन् । हुँदा खाने तथा दैनिक ज्याला मजदुरीले छाक टार्नेहरु भोक र शोकमा छन्– ‘परिवार कसरी पाल्नु !’
यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि उनीभित्र कलाकारिता मात्रै होइन, पशुपंक्षीप्रतिको प्रेम पनि छ । ‘न बोल्न नै सक्छन्, न भोक लाग्यो भन्न नै ! हामी सबैमा यीनीहरुप्रति माया नहोला तर मानवता भने पक्कै छ ! आफ्नो घर वरिपरिका जनावरहरुलाई आफूले सक्ने सम्म खाना खुवाउँ’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् ।
Previous भारतीय अभिनेता अक्षयले कोरोना कोषमा २५ करोड दिए रकम, माेदीले दिए धन्यवाद
Next फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेद्वारा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई गो-ली- हान्‍न आदेश